Uyini umehluko phakathi kwe-anticyclone nesiphepho? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Umehluko phakathi kwe-anticyclone (A) ne-squall (B)
Iziphepho kanye nama-anticyclone kubhekisa ekucindezelekeni okuhlukile komkhathi. Ingcindezi yasemkhathini ilinganiswa ngama-millibars (mbar). I-millibar ilingana nenkulungwane eyodwa ye-bar eyodwa, kanti ibha ilingana ne-1 atmosphere (atm). Kubalulekile ukwazi ukuthi i-millibar isho ukuthini, ngoba umehluko wama-millibars amaningi noma amancane esifundeni adala izivunguvungu nama-anticyclone.
Ngaphambi kokungena emininingwaneni, ama-anticyclone neziphepho zikhonjwa kalula emephini kucatshangelwa ama-isobars. Uma kunengcindezi enkulu kunokujwayelekile, isibonelo u-1024 mb, kulapho sikhuluma nge-anticyclone. Lapho ingcindezi iphansi, ngokwesibonelo ama-milligar angama-996, njengoba kubonakala esithombeni, sikhuluma ngesiphepho. Ukusuka lapha kuqhubeke, isimo sezulu esihambisana nezingcindezi ezahlukahlukene sehlukile.
Ngokuvamile singakuqhathanisa nesikhathi esizinzile, ngesibhakabhaka esicwebile neLanga. Ingcindezi yayo icishe isuke ku-1016 millibars noma ngaphezulu.
Umoya osemotweni oyisitshalo uzinzile ukwedlula umoya owuzungezile. Ngokulandelayo, umoya wehla usuka emkhathini, ukhiqize into eyaziwa ngokuthi "ukuzithoba." Ukuziphilisa okunjalo kuvimbela ukwakheka kwezulu. Indlela umoya owehla ngayo uyehluka kuye ngezwe lapho sikhona. ENyakatho Nenkabazwe, izungeza iye ohlangothini lwewashi. Futhi eningizimu yezwe, okuphambene nalokho.
Ngokuphikisana ne-anticyclone, ihlobene nesimo sezulu esingazinzile, isibhakabhaka esinamafu nemvula. Ingcindezi yayo ingaphansi kuka-1016 millibars.
Uhlangothi lokujikeleza komoya esivunguvungwini, okuthi kulokhu kuphakama, lwenze njalo lubheke ngakwelinye i-anticyclone. Lokho okungukuthi, ngokwewashi le-hemisphere eseningizimu nangakwesobunxele ukuya enyakatho yezwe.
Imvamisa ziletha imimoya, futhi zinciphise izinga lokushisa, ehlobo nasebusika. Imvamisa kwenzeka ngenxa yokungena kwemisebe yelanga embalwa, njengoba amafu ewabonisa, evimbela ukuthi angadluli.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Uyini umehluko phakathi kwe-anticyclone nesiphepho?